"Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin’ny fanompoana ao an-tranon’Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an’Andriamanitra dia nataony tamin’ny fony rehetra, ka dia nambinina izy” (2 Tantara 31:21) Ny mpanjaka Hezekia, izay nanjaka tao Joda fahizay, dia voalaza fa nanao izay tsara sy mahitsy teo anatrehan’i Jehovah. Mbola tanora tokoa izy satria 25 taona izy dia nandray ny fanjakàna (716-687). Nananaa andraikitra lehibe tamin’ny fanitsiam-pivavahana na ny fifohazam-panahy tamin’izanyI Hezekia ary voalazan’ny mpandinika fa ny Lalàna na ny Torah izay eo am-pelatanantsika amin’izao fotoana izao, dia vokatr’izany fanitsiam-pivavahana nataon’i Hezekia izany. Nanao izay tsara sy mety ary marina teo anatrehan’Andriamaniny izy, hoy ny andininy 20, izany hoe mamintina ny toetrany sy ny asa izay nataony tamin’ny vanim-potoana nanjakàny. Nandrava ny toerana fanompoan-tsampy izy ary nanapotipotika ny tsangam-batontsampy sy ny fitoerana avo rehetra ary nanorotoro ny Aseraha sy ny menaràna varahina. Ny bokin’ny mpanjaka dia milaza fa tsy nisy tahaka azy tamin’izay mpanjakan’i Joda, na ny teo aloha, na ny teo aoriana (2 Mpanjaka 18 :5). Hitantsika ary eto amin’ny andininy izay nofidiantsika eto amin’ny 2 Tantara 31:21 eto ny zava-miafin’ny fahombiazan’I Hezekia. Ny raharaha rehetra izat efa natombony ny amin’ny fanompoana ao an-tranon’Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an’Andriamanitra dia nataony tamin’ny fony rehetra ka dia nambinina izy. Zava-dehibe telo ary no hitantsika eto amin’ity mpanajaka iray ity ary ezahina ho velabelarina:
1) Nanao ny asa fanompoana tao amin’ny tranon’ Andriamanitra izy
Araka ny hitantsika tery aloha, mbola tanora tokoa Hezekia, nefa dia voafidy mpanjaka. Tsy nandeha tamin’ny rehaky ny tanora fanahy tahaka ny zanak’I Solomona fahizay, izay tsy mba nihaino ny antim-panahy izy, fa nandeha tamin’ny fahendrena tokoa, ka nanompo an’Andriamanitra. Ny asa fanompoana dia mitaky fanetren-tena lalina eo amin’izay manao azy, ary dia nanana izany toetra izany Hezekia. Raha nisy ny filàna ady teo amin’ny Asiriana sy ny teny ratsy nataon-dRabsake iraky ny Asyriana, dia nandidy ny vahoaka ny mpanjaka mba tsy hamaly azy akory. Ny olona manana ny fanahin’ny fanompoana dia tsy mba be teny, tsy mirehareha, tsy manampatra fahefàna ihany koa. Tsy malaky tezitra na mora mandray fanapahan-kevitra, fa mahafantatra ny tokony hataony. Rehefa voarain’I Hezekia ny taratasy milaza fandrahonana avy any amin’I Asiria, tsy avy hatrany dia namory ny miaramila izy akory, fa nentiny teo anatrehan’ny lehibeny, dia Andriamanitra aloha ny taratasy, tao an-tranon’Andriamanitra. Ny fanompoana ny tranon’Andriamanitra dia tsy hafa fa fanompoana an’Andriamanitra rahateo, ary toetran’I Hezekia izany, amin’ny zava-mitranga rehetra eo amin’ny fiainany sy ny fiainanm-pireneny, dia nataony laharam-pahamehana ny mitodika amin’Andriamanitra, ary dia tena nahasoa azy izany.
2) Nitady an’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny didy sy ny lalàna izy Tsy tamin’ny alalan’ny vavaka na ny fanatrehana an’Andriamanitra tao amin’ny Tempoly ihany no nitadiavany an’Andriamanitra fa tamin’ny alalan’ny Soratra Masina ihany koa. Nanaja an’izany izy, ka na dia nanana tombontsoa aza izy tamin’izay rehetra naha-tery azy, nahazo valiny mivantana tamin’ny mpaminany Isaia ny vaha-olana, dia tsy nionona tamin’izany izy. Andriamanitr’Isiraely mantsy dia Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Tsy nanao tsinontsinona ny Teny izay nataon’Andriamanitra tamin’ny razany izy dia ny didy sy ny lalàna fa nanao izany ho zava-dehibe tokoa. Azo tadiavina sy katsahina amin’ny teniny Andriamanitra ary mpanjaka tsara fanahy maro teo amin’ny tantaran’Isiraely no nahazo tombontsoa sy niaina ny Tenin’Andriamanitra sy nanaraka ny Didy sy ny fitsipika voaloza izany.
3) Tamin’ny fony rehetra no nanaovany izany rehetra izany.
Zava-dehibe tokoa ny toetran’I Hezekia eto. Ny fanaovana zavatra iray amin’ny fo, dia manambara fitiavana sy fankatoavana ihany koa. Noho ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny lalàny, dia nankato izay rehetra nandidiana azy izy. Tsy nisy fisalasalàna mihitsy teo aminy, ny amin’ny zavatra rehetra, tsy nisy tahotra ihany koa, raha nanapotika ohatra ny sampy nisy tamin’izany fotoana izany izy. Inona ary no vokatr’izany rehetra izany? Voalaza fa nambinina Hezekia. Ny zava-miafin’ny fanambinana araka izany dia fanatanterahana amin’ny fo ny fanompôana an’Andriamanitra sy ny fitadiavana azy amin’ny alalan’ny fitandremana ihany koa ny didy sy ny lalàna izay efa nomeny antsika. Ry Havana malala, nahoana no tahaka ny mandositra ny fanambinana, ary toa mikorontana indraindray ny fiainan’ny mpanompon’Andriamanitra sy ny asan’Andriamanitra? Ny valiny dia tsotra: mitady olona tahaka an’I Hezekia Andriamanitra amin’izao fotoana izao. Ilaina olona vonona hanompo marina ny Fiangonana, olona vonona hanetry tena, hialoka eo ambany tana-maherin’Andriamanitra, ka hankato azy amin’ny fo rehetra. Ny zava-misy mantsy dia matetika izay omena andraikitra na fahefàna dia tsy mahay loatra mihazona izany andraikitra izany araka ny toetra na ny fitsipika tokony hananana eo anatrehan’Andriamanitra. Mety ho latsaka amin’ny fieboeboana, na ny fitondrana jadona mihitsy aza. Toetra ratsy nahavoa ny mpanjaka ratsy fanahy teo amin’Isiraely izany ary mety hahazo ny mpitondra fivavahana ihany koa. Amin’izao fotoana mampasiaka ny devoly izao, izay sarin’ny zava-misy tamin’ny andron’I Hezekia, tamin’ny alalan’ny fandrahonan’ny Asyriana, dia mila manana toetra na ny fanahin’ny fanompoana marina isika kristiana sy isika mpanompon’Andriamanitra indrindra indrindra. Olon’ny vavaka Hezekia, ary tokony ho toy izany koa isika mpanompon’Andriamanitra. Manarak’izany, manana anjara toerana lehibe eo emin’ny mpanompon’Andriamanitra marina ny didy sy ny lalaàna. Tsy manompo an’Andriamabitra amin’ny alalan’ny asa ihany isika fa amin’ny alalan’ny fankatoavana ihany koa ny sitrapon’Andriamanitra. Ny mpanjaka tsara fanahy rehetra dia nazoto nitady an’I Jehovah tamin’ny alalan’ny fankatoavana ny didy sy ny lalàna rehetra ary nitrandraka izany. Andriamanitra dia tsy lavitra, fa hita amin’ny alalan’ny teniny izy. Tsy tokony ho tia tena isika, ka tsy hihaino afa-tsy ny Andriamanitra izay miteny amintsika amin’izao fotoana izao ihany. Tsarovy fa Andriamanitra Ilay taloha Izy, ankehitriny ary ho avy. Manana tombony be dia be izay mihaino Azy amin’ny alalan’ny mpaminany, ny didy ary ny lalàna. Ary mety tsy dia hahazo tombony loatra, mahia ary maty antoka ihany koa izay tsy mihaino afa-tsy Ilay Andriamanitra izay miteny amin’izao fotoana izao. Midika anie izany toy ny hoe: ny teny rehetra izay efa nataon’ny ray aman-dreny taloha tany dia tsy misy notsarovana ary tsy dia noraharahiana loatra, fa izay lazainy amin’izao fotoana izao ihany. Ny teny izay efa nolazainy taloha anefa, dia efa misy tondro-zotra na fananarana hitondrany ny ho avy. Dia toy izany koa ny Soratra Masiina na ny didy sy ny lalàna. Ilaina ary ny miverina ho amin’izany Soratra Masina marina izany. Tokony hitrandraka izany ny Fiangonana, indrindra amin’izao vanim-potoana ahenoana feo maro tahaka ny an-dRabsake iraky ny asyriana . Toa mila tsy ho re intsony ny feon’Andriamanitra fa ny feon’ny fieritreretan na feon’izao tontolo izao no mibahana: feon-gazety, radio, ny Television, ny Internet, ny tsaho etsy sy eroa, ny fampianaran-diso, ny fomba ama-panao maro samy hafa. Fotoana izao tokony hiverenana amin’ny Soratra Masina marina ary hitandrahana izany ho fitsipi-piainana sy ho antoky ny fahombiazana. Farany, izany rehetra izany dia tanterahina amin’ny fo sy fitiavana feno. Ny zava-doza dia safotry ny andraikitra sy ny asa ny olona ka tsy manana ny tena fitiavana intsony, eny na dia eo amin’ny asan’Andriamanitra aza. Ataovy amin’ny fontsika rehetra ny asa sy ny andraikitra tandrify antsika. Ho hitanao fa hahita fifaliana sy fahombiazana ianao amin’izany rehetra izany. Tandremo dia tandremo manao ny asa ao anatin’ny fahazaran,a fotsiny (monotonie), fa tsy hahitàna fanambinana izany. Ny mpiasan’Andriamanitra marina, dia feno fitiavana ilay asa nankinina aminy ary feno fifaliana izy eo am-panaovana izany asa izany. Ny fanaovana asa amin’ny fo, dia endriky ny fitiavana an’Andriamanitra amin’ny fo manontolo. Andriamanitra ao anaty izany no mandrisika atsika hanao ny asa amin’ny fontsika rehetra. Izany rehetra izany no fepetra takiana amintsika raha te ho ambinina isika sy te-ho sambatra. Jereo ange Hezekia fa na dia efa saiky maty aza, mbola nahazo tombon’andro lava indray e! Mahereza ry vahoakan’Andriamanitra sy mpanompon’Andriamanitra, aza kivy na amin’ny inona na amin’ny inona, fa Andriamanitra tsy mandao antsika na oviana na oviana.